Semalt: Fomba hamakafakana ny fahombiazanao SEO
2. Maninona no mamakafaka ny asanao SEO eo amin'ny toerana voalohany?
3. Fakafakao ny asa ataonao SEO
Te hanana toerana ambony kokoa ao amin'ny Google TOP ianao? Te hitondra fiara fitaterana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ianao? Te hampitombo ny lozan'ny fahombiazan'ny orinasa rehetra ianao? Ny famakafakana SEO dia mety ho zavatra ilainao ihany. Ny fampahalalana voaangona dia afaka manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra stratika hanatsarana ny laharan'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana, mitondra fiara mifindra bebe kokoa amin'ny tranokalanao sy ny maro hafa.
Semalt dia manana fitaovam-pahaizana momba ny tranonkala matanjaka ho an'ny fanaraha-maso mahomby amin'ny tsena; toerana fanaraha-maso ny tranonkalanao sy ny an'ny mpifaninana aminao; ary izy ireo koa dia manolotra anao tatitra momba ny fandraharahana momba ny analytics feno.
Maninona no mamakafaka ny asanao SEO eo amin'ny toerana voalohany?
1. Hanara-maso ny toeran'ny tranokalanao: Miaraka amin'i Semalt, avelao ianao hamorona sary feno momba ny fomba itobiana ny orinasanao amin'ny tsenan'ny Internet. Raha ny fampahalalana azo, dia afaka manasongadina ireo hevi-dehibe ianao amin'ny asanao amin'ny ho avy.
2. Mba hahitana tsena vaovao: Ho hitanao ny fotoana vaovao amin'ny fizarana entana sy serivisinao ary ny fivoaran'ny marika amin'ny firenena manokana izay manetsika ny paikady mifandraika amin'ny faritra.
3. Araha -maso akaiky ny toeran'ny mpifaninana aminao: ny Semalt dia manambara ny vaovao rehetra momba ny toe-tsenan'ny mpifaninana aminao. Ity fahalalana ity dia hanampy anao hamorona paikady mahomby mba hijanonana hatrany eo alohan'ny fonosana satria hahita ny zavatra ataon'izy ireo izay azonao atao ny mampiditra ao anatin'ny paikady mahomby.
4. Manao famelabelaranao ny famakafakianao: i Semalt dia manome anao tombontsoa miavaka ahazoana tatitra fotsy-soratra momba ny famakafakana izay azonao alaina amin'ny endrika PDF na EXCEL mivantana avy amin'ny tranonkalany. Tena ilaina tokoa izany rehefa mila manao fampisehoana ho an'ny mpanjifanao na ny ekipanao.
Fakafakao ny asa ataonao SEO
Aorian'ny fidirana mankany amin'ny takelakao, azonao atao ny tsindrio eo amin'ny lisitry ny sakafo eo ankavia izay ahitanao ny lisitry ny safidy ho an'ny fandalinana SEO.
Ao an-tampony indrindra, manana safidy ianao hanampy ny tranokala tianao hasiana fanadihadiana. Ity ambany ity dia manana ny bokotra Dashboard ianao fa afaka manindry ny fotoana rehetra hahatsapanao ho any amin'ny dashboard anao.
Avy eo eo ambanin'ny bokotra dashboard, no fitaovana famakafakana Semalt izay mizara ho fizarana 4 - SERP, Content, Google Webmasters ary Page Speed.
Andao hojerentsika ny fomba fiasan'ireo tsirairay avy ireo. Zava-dehibe ny manamarika eto fa afaka misintona tatitra foana ianao na aiza na aiza ahitanao bokotra "Mahazo tatitra."
Ny SERP dia manana fizarana 3 eto ambany:
a. Teny fanalahidy ao amin'ny TOP: Ny tatitra azo avy eto dia mampiseho ny teny fanalahidy rehetra izay ananan'ny tranokalanao ao amin'ny valin'ny fikarohana ara-boajanahary Google, pejy misy ny pejy ary ny toeran'ny SERP azy ho an'ny teny fanalahidy manokana. Rehefa manindry ny 'Keywords in TOP' ianao, dia alaina any amin'ny pejy iray ahitanao ny isan'ny teny ambony ao amin'ny TOP, ny fizarana teny fanalahidy amin'ny alàlan'ny TOP ary laharana amin'ny alàlan'ny teny fanalahidy.
Ny 'Number of Keywords' dia tabilao izay mampiseho ny isan'ny teny ao amin'ny Google TOP rehefa mandeha ny fotoana. Manampy anao amin'ny fandinihana ireo fiovana amin'ny isan'ny teny fanalahidy ao amin'ny tranokalan'ny tranokalan'ny fikarohana 1-100 TOP 1-100.
Miaraka amin'ny fanaparitahana ny teny fanalahidy amin'ny alàlan'ny TOP ', afaka mahita ny isan'ny teny manan-danja ianao ao amin'ny tranokalan'ny Google TOP 1-100.
Ny 'rankings by keywords' dia latabatra iray izay mampiseho anao ireo teny fanalahidy malaza indrindra ao amin'ny pejin'ny tranokalaninao ao amin'ny valin'ny fikarohana nataon'ny Google TOP. Ny latabatra ihany koa dia hampiseho aminao ny toerany SERP amin'ny daty voafantina sy ny fanovana niseho tamin'ny daty teo aloha. Rehefa manindry ny bokotra 'hitantana vondrona' ianao, afaka mamorona teny fanalahidy vaovao, mitantana ireo efa misy na azonao atao ny misafidy ireo teny ao amin'ny latabatra 'Rankings by Keywords' eto ambany ary ampio ao amin'ny andian-teny misy anao. Zava-dehibe io raha azonao ampiasaina hanaraha-maso ny fivoaran'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny lohahevitra, URL, sns.
Nomen'i Semalt anao ahafahana manivana ny data ao anaty latabatra amin'ny alàlan'ny tarehimarika samihafa ianao - teny iray na ampahany aminy, URL na ampahany aminy, Google TOP 1-100 ary miova ny toerany.
b. Pejy tsara indrindra: Rehefa manindry ny 'pejy tsara indrindra' ianao, dia haseho amin'ny pejy eo amin'ny tranonkalanao izay mitondra ny isan'ny mpandeha ara-boajanahary indrindra. Tokony handinika tsara ity ianao, hikaroka ireo lesoka SEO ao amin'ny pejy, manamboatra ireo hadisoana ireo, mampiditra votoaty tsy manam-paharoa bebe kokoa ary koa manentana ireo pejy ireo ho an'ireo taranaka fifamoivoizana bebe kokoa avy amin'ny Google.
Ny 'pejy tsara indrindra rehefa mandeha ny fotoana' dia tabilao izay manambara ny fiovana amin'ny isan'ny pejinao ao amin'ny TOP hatramin'ny nanombohan'ny tetikasananao. Azonao atao ny mijery ny angon-drakitra isan-kerinandro na isam-bolana rehefa manova ny haavo ianao.
Ity ambany ity 'Pejy tsara indrindra isaky ny mandeha', dia manana ny fitaovana 'Fahasamihafana' ianao izay manampy anao hahita ny habetsaky ny habaka ao amin'ny Google TOP 1-100 valin'ny fikarohana fikarohana natao tamin'ny daty mialoha. Azonao atao ny manodina ny mizana hizaha ny fahasamihafana isan-kerinandro na isam-bolana. Azonao atao koa ny mijery ny tsy fitoviana isa na ny endrika diary.
Misy ihany koa ny tabilao antsoina hoe 'Stats pages keywords stats' izay mampiseho ny fiovana amin'ny isan'ny teny fanalahidy notondroina tao amin'ny Google TOP ny pejy voafantina tao am-piandohan'ny tetikasa.
Farany, manana 'Pejy momba ny TOP' izahay, izay latabatra iray mampiseho ny isan'ny teny fanalahidy pejy iray voafidy ao amin'ny Google TOP amin'ny daty voafantina. Azonao atao ny mandika ny lisitry ny pejy tsara indrindra amin'ny URL na ny anjarany ary misafidy koa ny misafidy ireo pejy ao amin'ny tranonkalanao izay eo amin'ny laharana TOP 1-100.
c. Mpiara-miasa: Eto no hahitanao ny tranokala rehetra mankalaza ny 100 100 ho an'ny teny fototra mitovy amin'ny tranonkalanao. Ho hitanao eo koa ny toerana ijoroanao eo amin'ireo mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny isan'ny teny rehetra ao amin'ny TOP 1-100.
Eto amin'ity pejy ity dia hahita andian-dàlan-tsabatra antsoina hoe 'Shared Keywords' ianao izay mampiseho ny isan'ny teny zatra nizara izay nomen'ny tranonkalanao sy ny mpifaninana TOP 500 anao ao amin'ny Google SERP.
Manaraka, hitanao ny 'Shared Keywords Dynamics' izay tabilao izay mampiseho ny fiovana amin'ny isan'ny teny zatra ifampizarana izay notarihinao ireo mpifaninana manokana nasongadinao.
Eto ambany ianao dia hahita ny 'Fifaninanana ao amin'ny Google TOP' izay latabatra iray izay manambara ny isan'ny teny ifampizarana izay nomena anao sy ny tranokalan'ny mpifaninana aminao ao amin'ny TOP. Manome anao safidy i Semalt handinika ny fahasamihafanan'ny isan'ny teny manan-kaja natokana tamin'ny daty mialoha. Azonao atao ny mandika ny lisitry ny tranonkala mpifaninana aminao mampiasa ny domain feno na ny ampahany aminy ary azonao atao ny mampandahatra ny lisitry amin'ireo tranonkala niditra tao amin'ny TOP 1-100.
Eo ambanin'ilay fizarana atiny dia ahitanao ny fitaovana 'Pejy Uniqueness Check' izay aorian'ny fampipiana anao dia hitondra anao mankany amin'ny pejiny manokana. Eto no hahitanao raha mihevitra ny Google ny tranokalanao na tsia. Tsara homarihina fa na dia azonao antoka aza ny maha iray tokana ny mombamomba ny pejin-tranonkalanao, dia azo atao angamba ny nanateran'ny olon-kafa azy. Ary raha manondro ny votoatiny alohan'ny anao ny olona dia hahafantatra azy ireo ny loharano voalohany i Google raha toa ka voatonona mandrobona ny votoatinao. Tsy te-ho tratry ny sazy Google ianao satria manasazy anao ny Google raha manana votoaty variana anaty tranokalanao ianao.
Nomen'i Semalt anao isa isa ny isan-jato iray mampahafantatra anao hahalala hoe manao ny votoatin'ny tranonkalanao eo imason'i Google. Ny isa 0-50% dia milaza aminao fa heverin'ny Google fa voarebirebina ny votoatinao ary tsy misy ny fitomboana toerana ho an'ny tranonkala toy izany. Afaka manampy anao Semalt ny fanoloana ny votoatinao ankehitriny miaraka amin'ny tsy manam-paharoa mba hanome anao isa tsara kokoa.
Amin'ny 51-80%, ny Google dia mihevitra ny votoatinao ho toy ny manoratra indray amin'ny fomba tsara indrindra. Ny pejin-tranonkalanao dia manana vintana kely kokoa amin'ny fitomboana eo amin'ny tranonkala. Fa maninona raha manokan-tena raha afaka manome anao ny tsara indrindra i Semalt?
Amin'ny 81-100%, ny Google dia mihevitra ny pejinao ho tsy manam-paharoa ary ny toerana misy anao amin'ny tranonkalanao dia azo inoana fa hitombo tsy misy ahiahy ao amin'ny Google SERP.
Ho hitanao ny lisitry ny atiny rehetra izay hitan'i Googlebot ao amin'ny tranokala manokana horesahina (Semalt koa dia hanampy anao hanasongadina ireo ampahany avoakan'ny atiny anaty tranonkala).
Ary koa, hahita latabatra antsoina hoe 'Loharanon-javatra niavian'ny orana' ianao. Lisitry ny tranonkala izayheverin'i Google ho loharano voalohany amin'ny atodin'ny pejinao. Eto no azonao fantarina hoe inona avy ny ampahany amin'ny atin'ny pejinao no hita ao amin'ireo tranonkala tsirairay ireo.
Serivisy ity izay mampiseho anao ny fomba anehoan'ny tranonkalanao ny valin'ny fikarohana organik azon'ny Google raha toa ka mamantatra ireo olana momba ny fanondroana anao. Eo ambanin'izany dia hahita topimaso, fampisehoana ary sitemaps ianao.
a. Famintinana: Ao amin'ny fizarana fijery, azonao atao ny manolotra sy manamarina ny tranokalanao. Azonao atao koa ny manampy ny URL anao ao amin'ny Google index.
b. Performance: Ny angon-drakitra azonao eto dia hanambara aminao ny mahomby ny tranonkalanao. Azonao atao ny mampitaha ny angona amin'ny vanim-potoana voafaritra / fotoana voafetra. Hanampy anao hahita ny herin'ny tranonkalanao izany ary koa ny tsy mety rehetra misy fiantraikany amin'ny topinao.
c. Sitemaps: Ity no ahafahanao mametraka ny sitemap amin'ny tranokalanao mankany amin'ny Google hahitanao hoe iza ireo sitematy voatonona ary misy hadisoana ireo.
Eo ambanin'ny latabatra 'Arotsaka an-tsokosoko' dia ahitanao ny isan'ny sitrana napetrakao tao amin'ny kaonty fikarohana Google. Ato ianao dia afaka manamarina ny toerany sy ny isan'ny URL misy azy ireo.
Ny fitaovana 'Pejy hafainganana pejy' dia ampiasaina mba hamaritana raha mifanaraka amin'ny fenitra Google ny fotoana lanin'ny pejinao. Hahafantatra ireo lesoka mila fanamboarana koa izy ireo ary manome soso-kevitra fanatsarana tsara azonao ampiharana hanatsarana ny fotoana lanjan'ny pejinao. Izy io dia haka ohatra ny fotoana mavesatra eo ho an'ny mpizara desktop sy finday.
Ny iray tsy afaka manadino ny maha-zava-dehibe ny famakafakana ny fahaizanao SEO ary avy amin'ity lahatsoratra ity, azonao atao ny fomba anaovana ny fomba tsara indrindra - ny fomba Semalt.